अष्ट्रेलियाबाटै केक पठाएर नेपालमा आमाको मुख हेर्ने व्यवस्था ! - Himalayan Kangaroo
Posted by Himalayan Kangaroo | २३ बैशाख २०७३, बिहीबार ०४:१३ |
काठमाडौं । अध्ययनका क्रममा काठमाडौं हाल अष्ट्रेलियामा रहेका राजेश खड्कालाई आफ्नी आमाको जन्मदिन नजिकिएसँगै के गरौं,कसरी वीस गरौं भन्ने मनमा भइरहेको थियो । त्यही बेला मरुभूमीममा तिर्खाएका यात्रुले पानी भेट्टाए झैं भयो उनलाई,जब उनले केक टु नेपालको बारेमा थाहा पाए । तुरुन्तै उनले केक टु नेपालको अष्ट्रेलियास्थित कार्यलयमा सम्पर्क गरेर आफ्नो योजनाका बारेमा बताए । उनले काठमाडौं धुम्वाराहीस्थित आफ्नो घरको ठेगाना र आमाको सम्पर्क नम्बर पनि उपलब्ध गराए ।
त्यही नम्बरमा सम्पर्क गरेर दिइएको ठेगाना पछ्याउँदै केक टु नेपालको काठमाडौंस्थित प्रतिनिधिहरु राजेशजीको आमालाई जन्मदिनको शुभकामना र छोराको सम्मानयुक्त मायाले सिञ्चित वर्थ डे केक बोकेर उहाँको घरमा पुगे । अनि अष्ट्रेलियामा रहेको छोरा राजेशले जन्म दिनको शुभकामना सहित पठाएको केक हस्तान्तरण गरे । सात समुद्रपारि अष्ट्रेलियाबाट छोराले सम्झेर उपहार पठाइदिएकोमा निकै खुशी हुनुभएका आमा केक टु नेपालको नौलो र अर्थपूर्ण सेवाप्रति पनि अचम्भित हुनुभयो ।
यस पंक्तिकारको मोबाइल नम्बरमा फोन आयो । नम्बर चिने चिनेको जस्तो लाग्यो,फोन उठाएँ । फोन अनिल काफ्लेजीको रहेछ ।
सर अस्तिको भिडियोको बारेमा कुरा गर्नु थियो,तपाई कहाँ हुनुहुन्छ ? अनिलजीको प्रश्न ।
म अहिले एउटा काममा बाहिर छु । दिउँसो चक्रपथको क्याफेमा एउटा मिटिङ छ,त्यही भेटौं न हुन्छ ? मेरो प्रश्न ।
त्यसपछि त्यही भेट्ने वाचाका साथ उहाँले फोन राख्नुभयो ।
नभन्दै दिउँसो मिटिङ चलिरहेकै बेला क्याफेमै अनिलजी एक जना साथीलाई लिएर आउँनुभयो । आउँनेवित्तिकै एउटा झोला थमाइदिनुभयो–ह्याप्पी वर्थ डे सर । यो केक टु नेपाल र हिमालयन कङ्गारुको अष्ट्रेलियन टिमबाट तपाई वर्थ डे वीस ।
झोलामा प्याक गरिएको केक थियो । केक टु नेपालको बारेमा पूर्व जानकारी भएर पनि त्यो उपहार र वीस मेरो लागि अप्रत्यासित थियो । त्यसैले त्यो माया र सरप्राइज केक भन्दा कयौं गुणा मीठो थियो । अरुणजी,निरुजी र श्रीकृष्णजीलाई फेरि पनि धन्यवाद । अनि अनिलजीलाई पनि ।
यी दुई वटा परिदृश्य नै पर्याप्त छ,केक टु नेपालको सेवा र विशेषताका बारेमा थाहा पाउँन । तपाई अष्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ र नेपालमा रहेका आफन्त,साथीभाइहरुलाई कुनै पनि अवसरमा सरप्राइज गिफ्ट दिन चाहनुहुन्छ भने केक टु नेपाल तपाईको सपना पूरा गर्न तत्पर छ । यसै गरि अष्ट्रेलियामा रहेका आफन्तलाई नेपालबाट यस्तै सरप्राइज पठाउँन चाहनुहुन्छ भने पनि सक्नुहुनेछ ।
शुक्रवार नेपालीहरुले आमाको मुख हेर्ने औंशी मनाउँदैछन् । संसारमा मान्छेका लागि मात्र होइन जुनसुकै प्राणाीका लागि समेत आमा सबैभन्दा महान स्थानमा रहन्छन् । तर पूजनीय आमालाई विदेशमा रहेकै कारण मिस गर्नेहरु धेरै होलान् । आमाको मुख हेर्ने जस्तो पवित्र दिन आउँदा आमालाई सम्झेर मन खिन्न पार्नेहरु पनि होलान् । तर केक टु नेपालले तपाईलाई राहत र सन्तुष्टि दिन सक्छ । यसका लागि तपाईले अहिले नै केक टु नेपालबाट आफ्नी आमालाई मनपर्ने फ्लेबरको केक अहिले नै अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ ।
सम्झनुहोस् त भोलि आमाको मुख हेर्ने दिन तपाईले माया र सम्मान गरेर पठाइदिनुभएको मीठो केक काटेर खाँदै गर्दा तपाईको आमाको मुहारमा कति खुशी छचल्किदो हो । अनि आमाको त्यो खुशीको कारण तपाई बन्न पाउँदा तपाईलाई ती आमाको छोरा वा छोरी हूँ भन्न पाउँदा कति गर्व लाग्दो हो ! यो कल्पना होइन,वास्तविकता हो । किनकि यसलाई साकार पार्ने केक टु नेपाल (www.caketonepal.com.au) छँदै छ ।
यो सेवा अष्ट्रेलियाका सबै शहर र नेपालका काठमाडौं र चितवनमा उपलब्ध छ ।
Previousपुनर्निर्माणका लागि भिक्टोरियावासी नेपालको थप सहयोग
Nextमहन्थ ठाकुर विहीवार दिल्ली जाँदै,आखिर के पाक्दैछ दिल्लीमा ?
४ बैशाख २०७५, मंगलवार ०४:१३